Tag: sawir qaadis | Martech Zone
Wiilkaygu wuxuu u baahday kaar ganacsi oo loogu talagalay DJ-kiisa iyo wax soo saarkiisa muusigga (haa, wuxuu ku dhow yahay inuu haysto shahaadada Ph.D. ee Xisaabta). Si loo badbaadiyo meel marka aan ku soo bandhigeyno dhammaan kanaalladiisa bulshada kaarkiisa ganacsiga, waxaan dooneynay inaan soo bandhigno liis nadiif ah adoo adeegsanaya astaamaha adeeg kasta. Halkii aan ka iibsan lahayn mid kasta oo ka mid ah astaamaha ama ururinta ka socota goobta sawir kaydka ah, waxaan isticmaalnay Font Awesome. Font Awesome wuxuu ku siinayaa astaamaha dulinka ee la qaadi karo oo kara kara
Isniin, November 30, 2020 Talaado, Disembar 22, 2020 Douglas Karr
Haddii aadan raacayn Joel Comm, samee. Hadda. Joel waa mid ka mid ah ilaha aan ugu jeclahay tikniyoolajiyadda. Waa nin aftahan ah, daacad ah, oo si muuqata u hufan. Ma jirto maalin i ag socota oo aanan hubinayn waxa uu soo ogaaday ee xigta… maantana wuxuu ahaa nin weyn! Joel qof walba ha u ogaado qalabka cusub ee khadka tooska ah, saar.bg. Qalabku wuxuu adeegsadaa sirdoonka macmalka ah si uu u falanqeeyo sawirrada dadka ka dibna si sax ah oo dhammaystiran uga saaro asalka. Haddii
Jimco, Juun 8, 2018 Sabtida, Juun 9, 2018 Douglas Karr
Sanduuqa, DropBox, Google Drive… macaamiil aad u tiro badan oo dhammaantood adeegsanaya aalado kala duwan, faylalka macmiilkaygu waa musiibo. Toddobaadkiiba mar ama wax ka badan, waxaan u guuraa dhammaan xogta macmiilkeyga qayb nadiif ah oo abaabulan oo shabakad ah oo la kaydiyo. Maalinba maalinta ka dambaysa, inkasta, waxay ahayd masiibo la isku dayayo in la helo oo loo diro faylasha… illaa iyo hadda. Hay'adayada aan wada shaqeynta leenahay waxay isticmaashaa Droplr. Waan ku kalsoonahay inaan helo qalab kale oo faylasha lagu keydiyo, la iigama iibin markii hore. Si kastaba ha noqotee, waqti kadib
Daalacashada casriga ahi waxay qabanayaan shaqo aad u fiican iyagoo taageeraya qaabka sawirada dulinka ee la qaadi karo (SVG). Haddii aad la yaaban tahay waxa gobbledygook macnaheedu yahay, waa kuwan sharaxaad dhakhso leh. Aynu nidhaahno waxaad haysataa gabal yar oo garaaf ah oo waxaad rabtaa inaad hoos u dhigto baarka bogga, adigoo buuxinaya 10 jibbaarane. Waxaad ku buuxineysaa laba jibbaarane iskeed usameeye afargeesle ah x iyo y iskuduwaha si aad uxusuusato kuwaad buuxisay.
Haddii aad tahay nooca wax soo iibinta ee ku hadli kara jargon iyo istiraatiijiyad, waxaad u maleyneysaa inaad maalmahan qabanaysay shaqo aad u badan. Waxaan lahadleynaa IT folks, horumariyeyaasha iyo nashqadeeyayaasha… badanaana waa inaan tarjunaa inta udhaxeysa! Loogu talagalay waa hay'ad dijitaal ah oo abaalmarin ku guuleysatay oo soo saartay muuqaalkan quruxda badan si ay uga caawiso dadka inay fahmaan moodooyinka midabka iyo qaababka feylka. Iyada oo qalab casri ah oo leh cufnaan badan oo muuqaal ah iyo qaabab fayl ah iyo riixid bixinaysa xawaare dheellitiran iyo